DAAWO MUUQAAL:-Qaybtii Labaad ee wareysi xiiso badan oo Cabdisalaan Hereeri uu ka qaaday Fannaanka Xasan Aadan Samatar | Saadaal Media
DAAWO MUUQAAL:-Qaybtii Labaad ee wareysi xiiso badan oo Cabdisalaan Hereeri uu ka qaaday Fannaanka Xasan Aadan Samatar
Cabdisalaan Hereeri oo ah wariye u shaqeeya Telefishinka caanka ah ee Universal ayaa dhawaan wareysi xiiso badan ka qaaday fannaanka caanka ah ee Xasan Aadan Samatar, kaasoo uu kula kulmay gurigiisa oo ku yaal magaalada Jabuuti.
Wareysigaan oo ahaa qaybtii labaad ayuu fannaanka Xasan Aadan Samatar waxaa uu ku sheegay in burburka ku habsaday dalka soomaaliya aanu fankii soomaaliyeeed ka dambayn ee uu la burburay
Fannaanku wuxuu si qota dheer uga hadlay qiimahaha uu fanka lahaa waqtigii barisamaadka, kaasoo sheegay in ay waddamo badan oo dunida ah ay kusoo wareegi jireen, halkaasoo ay uga qayb geli jireen tartamo iyo bandhig faneedyo, ayagoo ay siddo diyaarad soomaaliyeed.
Waxaa fannaanku uu si qosol badan uga hadlay oo ka sheekeeyay fankiisa dhinaca Afka Maayga ah, kaasoo sheegay heesaha ugu badan ee uu qaado inuu miraha iyo laxankaba u sameeyay allaha u naxariistee Abwaan Sahal Macalin Ciise.
Waxaa fannaanka Samatar ugu dambayn uu si fiican uga sheekeeyay fannaaniinta iyo abwaaniinta safka hore uga jira, dhinaca codka, laxanka iyo miraha iyo ruwaayadihii uu ka qayb qaatay, kaasoo sheegay in heesaha ugu badan ee talantaaliga ah gabadha uu la qaaday ay tahay fannaanadda Sahra Axmed Jaamac.
HOOS KA DAAWO MUUQAAL